Shaqaale Soomaali ah oo u shaqeynayey MSF ayaa lagu diley Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Nayroobi - Shaqaale Soomaali ah oo u shaqeynayey hay’adda bani’aadamnimada ee caafimaadka ee caalamiga ah ee Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn/Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa shaley subax ku dhintey cusbitaalkii looga daweynayey dhaawac halis ah oo hore u soo gaarey. Gawaari uu ka mid ahaa mid ay leedahay MSF ayaa waddada lagu weererey Maarso 12-keedii.
Saacadda degaanku markii ay ahayd 1-dii duhurnimo (7 saac duhurnimo) ayaa niman hubeysan ay xabado ku fureen gawaarida, iyaga oo si xun u dhaawacay shaqaale Soomaali ah oo MSF u shaqeynayey, kaas oo ahaa ilaaliye dhinaca ammaanka ah. Saddex kale oo shaqaalaha Soomaalida ah ayaa ay shilkaa ka soo gaareen dhaawacyo fudud.
Gaariga markii xabadda lagu furayey waxa uu ka soo noqonayey kormeer uu ku tegey mid ka mid ah xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ee MSF ay ku leedahay Balcad oo 20km waqooyi ka xigta Muqdisho. Nimankii hubeysnaa waxa ay la tageen teleefoonadii gacanta iyo alaabo kale oo ay lacag ka mid tahay oo ay lahaayeen dadkii gaariga saarnaa, iyo weliba gaarigii laftiisa. Sidoo kale dadkii saarnaa gawaarida kale iyana waa la dhacay.
Sida ay tilmaameyso xogta ilaa hadda ay hay’addu hayso, uma eka in MSF si gaar ah loola bartilmaameedsadey weerarka laakiin hay’addu ilaa hadda xog ayaa ay ururineysaa.
Ka dib markii saddex shaqaale MSF ah lagu diley Kismaayo Isniintii Jannaayo 28-ka ahayd, MSF waxa ay gebi ahaanba hakisey joogitaankii shaqaalaheeda caalamiga ahi ay joogeen Soomaaliya. Haseyeeshee, waxaa barnaamijyada sii waday shaqaalaha degaanka. Dhammaadkii bishii Disembar 2007, waxaa Boosaaso lagu af-duubey laba shaqaalaheena caalamiga ah ka mid ah.
Waxaana la sii daayey markii la haystey hal toddobaad iyaga oo caafimaad qaba. MSF waxa ay marar badan cambaareysey weerarada lagu qaado shaqaalaha gargaarka iyo waxaana ay ka deyrisey raadka ay arrintaasi ku yeelan karto gargaarka la gaarsiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan. Waxa aan si naxariis leh ugu tacsiyadeyneynaa qoyskiisii iyo saaxiibadiisa.
MSF waxa ay Soomaaliya ka shaqeysaa laga soo bilaabo 1991.
Tags: balcad, gaari, geeri, risaas, shaqaale